15.10.2020 မှ 21.10.2020 အထိ(၇) ရကျသားသမီး တဈပတျစာ ဟောစာတမျး.. ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ)’ – Askstyle
15.10.2020 မှ 21.10.2020 အထိ(၇) ရကျသားသမီး တဈပတျစာ ဟောစာတမျး.. ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ)’
15.10.2020 မှ 21.10.2020 အထိ (၇) ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း.
ယခုကာလအတွင်း အကောင်းအဆိုး၊ ရောထွေးနေသော ကာလဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေမည်ဟု တစ်ထစ်ချ တွက်ဆထားသည့် အရာအားလုံး လွဲချော်နေမည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလာပေ လိမ့်မည်။ ပုံမှန်ငွေဝင်ကောင်းနေရာမှ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ငွေဝင်နည်းမည်။ သို့သော်၊ ပုံမှန်ထား အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ နေသားကျမှုနှင့် အလုပ်ရှင်များ ငွေရှင်များ၏ ယုံကြည်အားကိုးမှုကို ခံရမည်။ ယာဉ်၊ ကားနှင့် အနုပညာရပ်များ၊ ပန်းချီ၊ စာရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်လျှင် အလွန်လှပနှစ်သက်ဖွယ်ပုံများ အဖိုးတန်ကုန် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြစ်မည်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် လင်နှင့်မယား လျှာနှင့်သွားဆိုသလိုစကားများ၊ ရန်ဖြစ်၊ အိမ်က ဆင်းသွား သည်အထိ ကြီးကျယ်သွားတတ်ပါသည်။ သည်းခံပါ။ ပညာရေးတွင် အမိအဘအကြီးအကဲများရဲ့ အထောက်အပံ့ အပြည့်အဝအကူအညီရနေမည်။ ပျော်ရွှင်သော ပညာသင်ကြား ချိန်ဖြစ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် ပညာ ရှာရင်းနဲ့ ကြင်ယာပါ တွေ့ရတတ်သည်။ချစ်သူရှိပြီးသူများလူချင်းတွေ့ဆုံဖို့ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးတွင် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောနှင့် အစား အသောက် မှားမှုကြောင့် ဝေဒနာ များ ခံစားနေရမည်။ တော၊တောင်များသို့ သွားမိ လျှင် အပြန်တွင် ရောဂါရတတ်သည်။
အထူးဟော ကျန်းမာရေး ရုတ်တရက်ညံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
ယတြာ ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးတစ်ဘူး လူကြီးမိဘတစ်ဦးကိုလှူလိုက်ပါ။
ယခုကာလအတွင်း ဂုဏ်သိက္ခာတိုးတတ်မြင့်မားချိန်ဖြစ်၍ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးသစ်များ ဆေးခြယ်၊ ပုံဖေါ်နိုင်မည်။ သင်၏စီးပွားရေးတွင် ငွေမြုပ်နေရာမှ ရုတ်တရက် အောင်မြင်မှုလမ်းများ ပွင့်လာမည်။ ငွေထုတ်ပေး မည့်သူနှင့် မင်းစိုးရာဇာတို့၏ အားပေးကူညီမှုကို ရရှိမည်။ သို့သော် စာချုပ်နှင့် နှုတ်ကတိများ ကိုယ့် ဘက်က စတင် ပြုလုပ်လျှင် အမှားကြုံတတ်သည်။ အလွန်အာမခံခြင်းကို ရှောင်ပါ။ အစစကောင်းမွန်လာသော အချိန်ဖြစ်သော် လည်း ငွေကုန်ကျမှုများနေဦးမည်။ အချစ်ရေးတွင် ချစ်သူသည် အဝေးတစ်နေရာသို့ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ထွက်ခွာသွား ပေ လိမ့်မည်။
အချစ်မရှိသေးသူများအတွက် အချစ်သည် မြင်သာမြင်၍ မကြင်နာနိုင်သော အခြေအနေတွင် ရှိ နေမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် စိတ်လေလွင့်၍ အိပ်မပျော် ဖြစ်နေမည်။ ခြေထောက်မှာ အနာ၊ အဖု၊ အပိန့်များ ထွက် ဖြစ်မည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ပျက်ကျရန် အလွန်နီးသဖြင့် သတိပြုသင့်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဤကာလ အတွင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ရက်များကို ဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်။ ပညာရေးတွင် နယ်ဝေး ပညာသင်သွား လိုသူများ၊ ကျောင်းပြောင်းလိုသူများ အလွယ်တကူ ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မည်။ စတင်သင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲမှု၊ နားမ လည် မှုများ ကြုံတွေ့ရမည်။ အထူးသဖြင့် ဘာသာစကား၌ အခက်ကြုံရတတ်သည်။
ယခုကာလအတွင်း ထူးခြားသည့် အကူအညီအထောက်အပံ့ကောင်းများ ရရှိမှုများကြောင့် ရာထူးတိုးတတ် ခြင်း၊လုပ်ငန်းတွင်အကျိုးရှိကြီးပွားမှုများတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကြိတ် အနယ် ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်နေရမည်။ အချိန်တိုင်း စကားများစွာ ပြောဆိုနေရ၍ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနေရမည်။ ငွေဝင် ကောင်းချိန်၊ ကံကောင်းနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ဘက်များထံမှ ငွေများ သို့မဟုတ် အကြွေးဟောင်းများ ပြန်ရမည်။ သို့သော် ကိုယ်တိုင် အလိမ်အညာခံရ၍ ငွေကုန်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် အတူသွား၊ အတူးစားရင်း ရယ် စရာလေးများ ပြောဆိုကာ သာယာသော အိမ်ထောင်မှု ချမ်းသာကို ရရှိမည်။
ပညာရေးတွင် ပညာရေးထက် အပျော် အပါးနှင့် ကစား၊ အစားဘက်သာ များနေမည်။ သင်တန်းတတ်ရန် ငွေသွင်းပြီးမှ ပြီးဆုံးအောင် မတတ် ရောက်နိုင်မှု နှင့် ဟိုရောင်ရောင် သည်ရောင် ရောင်ဖြစ်နေမည်။ အားကစားတွင် အနိုင်ရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် အချစ်မဲ့သော ကာလဖြစ်သော်လည်း အိမ်ထောင်ပြုလိုသော ဆန္ဒတွေများနေမည်။ အချစ်မပါပဲ သူတစ်ပါး အောင်သွယ်ပေးမှု ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုရန် အလွန်နီးစပ်နေမည်။ ခရီးသွားရင်း အချစ်တွေ့ ရမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ဆီးနည်းပါးခြင်း၊ ကျောက်ကပ် အားနည်းခြင်းများ ကြုံတွေ့ရမည်။ ညောင်းညာကိုက်ခဲ နေမည်။ သွေးသွင်းမှားတတ်သည်။
အထူးဟော စုတ်လာဘ် ဝင်ကိန်းရှိပါတယ်။
ယတြာ ပန်းသီးလေးတွေ စိပ်ပြီးဘုရားကပ်လှူပေးပါ။
ယခုကာလအတွင်း ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များအားလုံး အခက်အခဲကြားမှ အဆင်ပြေ အောင်မြ င်မှုများ ကြုံရပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်၊ မမျှော်လင့် ထားသည့် ဝင်ငွေကောင်းများ ရရှိလာပါလိမ့်မည်။ ရုတ်တရက် ခရီးသွားရကိန်းမြင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးများ စတင်လုပ်ကိုင်သင့်သော အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ အလုပ် ရှာသူ များ အလုပ်ရမည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စာရင်းကိုင်နှင့် အရည်နဲ့ပတ်သက်သောစီးပွားရေးတို့တွင် ကိုယ်နှင့်ဆိုင်ရာ တစ်ခုခုမှ ကောင်းကျိုးပြုလာလိမ့်မည်။ စာချုပ်နှင့် နှုတ်ကတိများ လွဲချော်နိုင်ပါသည်။ သတိထား၍ လက်မှတ်ရေး ထိုးသင့်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာများ အခက်အခဲကြုံတွေ့နိုင်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် အေးစက်စက်နှင့် အလုပ်နှင့်တာဝန်ကို ဦးစားပေးနေရသဖြင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လွမ်းရေးထက် ဝမ်းရေးကို ဖြည့်စွက်နေ ရမည်။ ပညာရေးတွင် လက်ရှိပညာရေးမှ အခြားပညာရပ်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းရန် ကြံရွယ်ဖြစ်မည်။ သင်ယူလို သောပညာရပ်က များနေသောကြောင့် အရွေးရခက်နေမည်။ သင်တန်းများ ပျက်ကွက်နေမည်။ နောက်ပိုင်းအချိန် ကာလတစ်ခုသို့ရောက်မှ ပညာရေးစိတ်ဝင်စားနေမည်။ အချစ်ရေးတွင် ချစ်ကံခေသော အချိန်ဖြစ်၍ အစစ၊ အပြော အဆို သတိပြုသင့်သည်။ ချစ်နေသူများ လမ်းခွဲစကားပြောဖြစ်မည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အချစ်ဝေဒနာကြောင့် အအိပ် ပျက်၊ အစားပျက် ဖြစ်မည်။ စိတ်လေလွင့်မည်။
ယတြာ နို့ကြက်ဥတစ်ခွက် ဘုရားရှင်အားကပ်လှူပါ။
ယခုကာလအတွင်း သင်၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းများ အကူအညီပေး လာပါမည်။ စပ်တူနှင့် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ငွေဝင်မည်။ စကားအပြာအဆို မမှားမိစေရန် အထူးသတိထား ပြောဆိုသင့်ပါသည်။ ခရီးတိုလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မည်။ ညီငယ်၊ ညီမငယ်များရဲ့လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှုများ ကြား သိရမည်။ မိမိအနေနဲ့ ကြိုးစားလျှင် ကြိုးစားသလောက် အောင်မြင်သောအချိန်ကာလဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင် ရေး တွင် အိမ်ထောင်ဖက်မှာ စီးပွားရေးနှင့် သူ့ပညာရေးအတွက်သာ စူးစိုက်လုပ်ကိုင်နေမည်။ အိမ်တွင်းရေးတာဝန်များ လစ်ဟင်းနေမည်။
ပညာရေးတွင် ပညာသင်ယူရန် စိတ်ရှိသော်လည်း တခြားအလုပ်များကြောင့် ပညာရေး တစ်ပိုင်း တစ်စ ရပ်နားထားရမည်။ ဆရာခေါ်ပြီးမှ မသင်ယူဖြစ်၊ သင်တန်းစုံစမ်းပြီးမှ မတတ်ရောက်ဖြစ်၊ လူမှုရေး၊ အိမ် တွင်းရေး ကိစ္စများကိုသာ ဦးစားပေးနေဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် ချိန်ထားပြီးမှ လွဲချော်နေတတ်သည်။ ချစ်သူ၏ အထင်လွဲမှု စိတ်ကောက်မှုကို ခံရမည်။ အချစ်သစ်ရှာလိုသော်လည်း ရှာမရ၍ အချစ်ငတ်နေသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အစားအသောက် မှားယွင်းမည်။ အစာမကြေရောဂါနှင့် ဆီးအောင့် ၊ ဆီးပူဝေဒနာများ ခံစား ရမည်။ အပူအအေးမျှတအောင် နေထိုင်စားသောက်သင့်ပါတယ်။
ယတြာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ယခုကာလအတွင်း အင်္ဂါသားသမီးများနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကံကောင်းစေတတ်ပါတယ်။ တပည့် လက်သားများ ကိုယ့်ထံကထွက်၍ ကိုယ်ပြိုင်ဘက်ထံ ရောက်သွား တတ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းသစ် များ တတ်ရခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း ပါဝင်နေခြင်းများ ကြုံမည်။ သင်၏စီးပွားရေးတွင် ဆရာမိဘများ၏ အကူ အညီကြောင့် စီးပွားရေးကောင်းလာမည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အကျိုးဆောင်၊ စာချုပ်၊ စာတမ်းများ စသော အထွေထွေလုပ်ငန်းတို့ကြောင့် ဟိုနည်းနည်း ၊ ဒီနည်း နည်းဖြင့် ငွေများ ပုံမှန်ဝင်နေမည်။ ဝင်ငွေကောင်းနေသော အချိန်ကာလဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် နှစ်ကိုယ့် တစ်စိတ် ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင်ဖြင့် အတွဲညီသော ဇနီးမောင်နှံဖြစ်မည်။ သားသမီးတို့အတွက် နှစ်ယောက် စလုံး စိတ်ပူပန်ဖြစ်မည်။ ပညာရေးတွင် ဟိုစပ်စပ်၊ သည် စပ်စပ်နှင့် ဘယ်တော့မှ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မရောက်ပဲ ဖြစ် မည်။ အချစ်ရေးတွင် အသက်ကြီးသူ၏ ချစ်မြတ် နိုးမှု၊ စိုးမိုးလွှမ်းမိုးမှုကို ခံရမည်။ အနီးအနားရှိ ငယ်ရွယ် သူများနှင့်လည်း ကြိုးချင်းထားပြီး ငြိတွယ်သွားတတ် ကြသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ရေချိုးမှားမည်။ ညဘက်တွင် ခေါင်းလျှော်တာမျိုးအထူးရှောင်စေချင်ပါတယ်။ မိန်းက လေး များ ချွေးငုတ်၊သွေးငုတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ယခုကာလအတွင်း ဤကာလအတွင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ငွေအစုအလိုက်အပုံလိုက် ဝင်ကိန်းရှိနေပါ၍ ထီကံ စမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသင့် ပါသည်။ သင်၏ကံဇာတာအထူးကောင်းနေသော်လည်း အရာရာကိုတော့ သတိပြုပါ။ သင်၏ကုသိုလ်ကံတရားကြောင့် တွေ့ကြုံ ရင် ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများကို ကျော် လွှား သွား နိုင်မည်။ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ဒီထက်တဆင့်မြင့်သောအလုပ်၊ဋ္ဌာနနှင့်နေရာထိုင်ခင်းသစ်များ ပြောင်းလဲနေ ထိုင်ရခြင်းများ ရှိမည်။ သင် သည် ချေးငှားထားသော ငွေကြေးများ ပြန်လည်မရရှိမှုများကြောင့် စိတ်ညစ်ရခြင်း ရှိ မည်။ ထို့အပြင် အလိမ်ခံရ တတ်ခြင်း၊ အမှုဖြစ်တတ်ခြင်း၊ အမှုပတ်တတ်ခြင်းတွေကိုလည်း သတိထားရန် လိုမည်။
မကြာခဏငွေကြေးအရှုပ် အရှင်းပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်ပါကအိမ်တွင်းရေး အဆင် ပြေမည်။ ငယ်ရွယ်သူ များ၏ အချစ်ရေးမှာ ကြားစကားကြောင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အထင်အမြင် လွဲမှားခြင်းများ ရှိနေမည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကံကောင်းခြင်းများ ရှိနေမည်။ပညာအသစ်များသင်ယူခွင့်ရရှိမည်။ ကျန်းမာရေးမှာ မကြာခဏ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ရောက်ရ တတ်ပါသည်။ ညနေဘက် နေရောင် မရှိတော့သည့်အချိန်တွင် ရေချိုးခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းမျိုးကို လုံးဝရှောင် ကြဉ်သင့်ပါသည်။
09 77 5555 695
15.10.2020 မှ 21.10.2020 အထိ (၇) ရကျသားသမီး တဈပတျစာ ဟောစာတမျး.
ယခုကာလအတှငျး အကောငျးအဆိုး၊ ရောထှေးနသေော ကာလဖွဈသညျ။ အဆငျပွမေညျဟု တဈထဈခြ တှကျဆထားသညျ့ အရာအားလုံး လှဲခြျောနမေညျ။ သငျ၏စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားသညျ အသှငျသဏ်ဍာနျအမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲလာပေ လိမျ့မညျ။ ပုံမှနျငှဝေငျကောငျးနရောမှ ရုတျတရကျ ပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ငှဝေငျနညျးမညျ။ သို့သျော၊ ပုံမှနျထား အလုပျကြှမျးကငျြမှု၊ နသေားကမြှုနှငျ့ အလုပျရှငျမြား ငှရှေငျမြား၏ ယုံကွညျအားကိုးမှုကို ခံရမညျ။ ယာဉျ၊ ကားနှငျ့ အနုပညာရပျမြား၊ ပနျးခြီ၊ စာရေး၊ လုပျငနျးမြား ဖွဈလြှငျ အလှနျလှပနှဈသကျဖှယျပုံမြား အဖိုးတနျကုနျ ပစ်စညျးမြား ထုတျလုပျဖွဈမညျ။
အိမျထောငျရေးတှငျ လငျနှငျ့မယား လြှာနှငျ့သှားဆိုသလိုစကားမြား၊ ရနျဖွဈ၊ အိမျက ဆငျးသှား သညျအထိ ကွီးကယျြသှားတတျပါသညျ။ သညျးခံပါ။ ပညာရေးတှငျ အမိအဘအကွီးအကဲမြားရဲ့ အထောကျအပံ့ အပွညျ့အဝအကူအညီရနမေညျ။ ပြျောရှငျသော ပညာသငျကွား ခြိနျဖွဈသညျ။ အခဈြရေးတှငျ ပညာ ရှာရငျးနဲ့ ကွငျယာပါ တှရေ့တတျသညျ။ခဈြသူရှိပွီးသူမြားလူခငျြးတှဆေုံ့ဖို့ခကျခဲနတေတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ ဝမျးပကျြ၊ ဝမျးလြှောနှငျ့ အစား အသောကျ မှားမှုကွောငျ့ ဝဒေနာ မြား ခံစားနရေမညျ။ တော၊တောငျမြားသို့ သှားမိ လြှငျ အပွနျတှငျ ရောဂါရတတျသညျ။
အထူးဟော ကနျြးမာရေး ရုတျတရကျညံ့သှားနိုငျပါတယျ။
ယတွာ ဒဏျကွလေိမျးဆေးတဈဘူး လူကွီးမိဘတဈဦးကိုလှူလိုကျပါ။
ယခုကာလအတှငျး ဂုဏျသိက်ခာတိုးတတျမွငျ့မားခြိနျဖွဈ၍ အကောငျးဆုံး အခှငျ့အရေးသဈမြား ဆေးခွယျ၊ ပုံဖျေါနိုငျမညျ။ သငျ၏စီးပှားရေးတှငျ ငှမွေုပျနရောမှ ရုတျတရကျ အောငျမွငျမှုလမျးမြား ပှငျ့လာမညျ။ ငှထေုတျပေး မညျ့သူနှငျ့ မငျးစိုးရာဇာတို့၏ အားပေးကူညီမှုကို ရရှိမညျ။ သို့သျော စာခြုပျနှငျ့ နှုတျကတိမြား ကိုယျ့ ဘကျက စတငျ ပွုလုပျလြှငျ အမှားကွုံတတျသညျ။ အလှနျအာမခံခွငျးကို ရှောငျပါ။ အစစကောငျးမှနျလာသော အခြိနျဖွဈသျော လညျး ငှကေုနျကမြှုမြားနဦေးမညျ။ အခဈြရေးတှငျ ခဈြသူသညျ အဝေးတဈနရောသို့ အလုပျကိစ်စဖွငျ့ ထှကျခှာသှား ပေ လိမျ့မညျ။
အခဈြမရှိသေးသူမြားအတှကျ အခဈြသညျ မွငျသာမွငျ၍ မကွငျနာနိုငျသော အခွအေနတှေငျ ရှိ နမေညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ စိတျလလှေငျ့၍ အိပျမပြျော ဖွဈနမေညျ။ ခွထေောကျမှာ အနာ၊ အဖု၊ အပိနျ့မြား ထှကျ ဖွဈမညျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမြား ပကျြကရြနျ အလှနျနီးသဖွငျ့ သတိပွုသငျ့ပါသညျ။ အိမျထောငျရေးမှာ ဤကာလ အတှငျး ပြျောရှငျခမျြးမွသေ့ော ရကျမြားကို ဖွတျသနျးရလိမျ့မညျ။ ပညာရေးတှငျ နယျဝေး ပညာသငျသှား လိုသူမြား၊ ကြောငျးပွောငျးလိုသူမြား အလှယျတကူ ပွောငျးရှဖွေ့ဈမညျ။ စတငျသငျကွားရာတှငျ ခကျခဲမှု၊ နားမ လညျ မှုမြား ကွုံတှရေ့မညျ။ အထူးသဖွငျ့ ဘာသာစကား၌ အခကျကွုံရတတျသညျ။
ယခုကာလအတှငျး ထူးခွားသညျ့ အကူအညီအထောကျအပံ့ကောငျးမြား ရရှိမှုမြားကွောငျ့ ရာထူးတိုးတတျ ခွငျး၊လုပျငနျးတှငျအကြိုးရှိကွီးပှားမှုမြားတှကွေုံ့ရငျဆိုငျရတတျပါတယျ။သငျ၏စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို အကွိတျ အနယျ ယှဉျပွိုငျလုပျကိုငျနရေမညျ။ အခြိနျတိုငျး စကားမြားစှာ ပွောဆိုနရေ၍ ပွဿနာမြား ဖွရှေငျးနရေမညျ။ ငှဝေငျ ကောငျးခြိနျ၊ ကံကောငျးနခြေိနျ ဖွဈပါသညျ။ ပွိုငျဘကျမြားထံမှ ငှမြေား သို့မဟုတျ အကွှေးဟောငျးမြား ပွနျရမညျ။ သို့သျော ကိုယျတိုငျ အလိမျအညာခံရ၍ ငှကေုနျတတျသညျ။ အိမျထောငျရေးတှငျ အတူသှား၊ အတူးစားရငျး ရယျ စရာလေးမြား ပွောဆိုကာ သာယာသော အိမျထောငျမှု ခမျြးသာကို ရရှိမညျ။
ပညာရေးတှငျ ပညာရေးထကျ အပြျော အပါးနှငျ့ ကစား၊ အစားဘကျသာ မြားနမေညျ။ သငျတနျးတတျရနျ ငှသှေငျးပွီးမှ ပွီးဆုံးအောငျ မတတျ ရောကျနိုငျမှု နှငျ့ ဟိုရောငျရောငျ သညျရောငျ ရောငျဖွဈနမေညျ။ အားကစားတှငျ အနိုငျရတတျသညျ။ အခဈြရေးတှငျ အခဈြမဲ့သော ကာလဖွဈသျောလညျး အိမျထောငျပွုလိုသော ဆန်ဒတှမြေားနမေညျ။ အခဈြမပါပဲ သူတဈပါး အောငျသှယျပေးမှု ကွောငျ့ အိမျထောငျပွုရနျ အလှနျနီးစပျနမေညျ။ ခရီးသှားရငျး အခဈြတှေ့ ရမညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ ဆီးနညျးပါးခွငျး၊ ကြောကျကပျ အားနညျးခွငျးမြား ကွုံတှရေ့မညျ။ ညောငျးညာကိုကျခဲ နမေညျ။ သှေးသှငျးမှားတတျသညျ။
အထူးဟော စုတျလာဘျ ဝငျကိနျးရှိပါတယျ။
ယတွာ ပနျးသီးလေးတှေ စိပျပွီးဘုရားကပျလှူပေးပါ။
ယခုကာလအတှငျး ဖွဈခငျြသောဆန်ဒနှငျ့ ရညျမှနျးခကျြမြားအားလုံး အခကျအခဲကွားမှ အဆငျပွေ အောငျမွ ငျမှုမြား ကွုံရပါလိမျ့မညျ။ မထငျမှတျ၊ မမြှျောလငျ့ ထားသညျ့ ဝငျငှကေောငျးမြား ရရှိလာပါလိမျ့မညျ။ ရုတျတရကျ ခရီးသှားရကိနျးမွငျသညျ။ သငျ၏စီးပှားရေးမြား စတငျလုပျကိုငျသငျ့သော အခြိနျကာလဖွဈသညျ။ အလုပျ ရှာသူ မြား အလုပျရမညျ။ ဘဏျလုပျငနျး၊ စာရငျးကိုငျနှငျ့ အရညျနဲ့ပတျသကျသောစီးပှားရေးတို့တှငျ ကိုယျနှငျ့ဆိုငျရာ တဈခုခုမှ ကောငျးကြိုးပွုလာလိမျ့မညျ။ စာခြုပျနှငျ့ နှုတျကတိမြား လှဲခြျောနိုငျပါသညျ။ သတိထား၍ လကျမှတျရေး ထိုးသငျ့သညျ။ ဆောကျလုပျရေးဆိုငျရာမြား အခကျအခဲကွုံတှနေို့ငျသညျ။
အိမျထောငျရေးတှငျ အေးစကျစကျနှငျ့ အလုပျနှငျ့တာဝနျကို ဦးစားပေးနရေသဖွငျ့ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ လှမျးရေးထကျ ဝမျးရေးကို ဖွညျ့စှကျနေ ရမညျ။ ပညာရေးတှငျ လကျရှိပညာရေးမှ အခွားပညာရပျတဈခုသို့ ကူးပွောငျးရနျ ကွံရှယျဖွဈမညျ။ သငျယူလို သောပညာရပျက မြားနသေောကွောငျ့ အရှေးရခကျနမေညျ။ သငျတနျးမြား ပကျြကှကျနမေညျ။ နောကျပိုငျးအခြိနျ ကာလတဈခုသို့ရောကျမှ ပညာရေးစိတျဝငျစားနမေညျ။ အခဈြရေးတှငျ ခဈြကံခသေော အခြိနျဖွဈ၍ အစစ၊ အပွော အဆို သတိပွုသငျ့သညျ။ ခဈြနသေူမြား လမျးခှဲစကားပွောဖွဈမညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ အခဈြဝဒေနာကွောငျ့ အအိပျ ပကျြ၊ အစားပကျြ ဖွဈမညျ။ စိတျလလှေငျ့မညျ။
ယတွာ နို့ကွကျဥတဈခှကျ ဘုရားရှငျအားကပျလှူပါ။
ယခုကာလအတှငျး သငျ၏စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားအတှကျ မိတျဟောငျးဆှဟေောငျးမြား အကူအညီပေး လာပါမညျ။ စပျတူနှငျ့ အကြိုးဆောငျလုပျငနျးမှ ငှဝေငျမညျ။ စကားအပွာအဆို မမှားမိစရေနျ အထူးသတိထား ပွောဆိုသငျ့ပါသညျ။ ခရီးတိုလုပျငနျးမြား အောငျမွငျမညျ။ ညီငယျ၊ ညီမငယျမြားရဲ့လုပျငနျး အောငျမွငျမှုမြား ကွား သိရမညျ။ မိမိအနနေဲ့ ကွိုးစားလြှငျ ကွိုးစားသလောကျ အောငျမွငျသောအခြိနျကာလဖွဈသညျ။ အိမျထောငျ ရေး တှငျ အိမျထောငျဖကျမှာ စီးပှားရေးနှငျ့ သူ့ပညာရေးအတှကျသာ စူးစိုကျလုပျကိုငျနမေညျ။ အိမျတှငျးရေးတာဝနျမြား လဈဟငျးနမေညျ။
ပညာရေးတှငျ ပညာသငျယူရနျ စိတျရှိသျောလညျး တခွားအလုပျမြားကွောငျ့ ပညာရေး တဈပိုငျး တဈစ ရပျနားထားရမညျ။ ဆရာချေါပွီးမှ မသငျယူဖွဈ၊ သငျတနျးစုံစမျးပွီးမှ မတတျရောကျဖွဈ၊ လူမှုရေး၊ အိမျ တှငျးရေး ကိစ်စမြားကိုသာ ဦးစားပေးနဖွေဈမညျ။ အခဈြရေးတှငျ ခြိနျထားပွီးမှ လှဲခြျောနတေတျသညျ။ ခဈြသူ၏ အထငျလှဲမှု စိတျကောကျမှုကို ခံရမညျ။ အခဈြသဈရှာလိုသျောလညျး ရှာမရ၍ အခဈြငတျနသေော အခြိနျဖွဈသညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ အစားအသောကျ မှားယှငျးမညျ။ အစာမကွရေောဂါနှငျ့ ဆီးအောငျ့ ၊ ဆီးပူဝဒေနာမြား ခံစား ရမညျ။ အပူအအေးမြှတအောငျ နထေိုငျစားသောကျသငျ့ပါတယျ။
ယတွာ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ ဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
ယခုကာလအတှငျး အင်ျဂါသားသမီးမြားနှငျ့ ပူးတှဲဆောငျရှကျမှုမြားဖွငျ့ ကံကောငျးစတေတျပါတယျ။ တပညျ့ လကျသားမြား ကိုယျ့ထံကထှကျ၍ ကိုယျပွိုငျဘကျထံ ရောကျသှား တတျသညျ။ ဝနျထမျးမြား သငျတနျးသဈ မြား တတျရခွငျး၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခုအတှငျး ပါဝငျနခွေငျးမြား ကွုံမညျ။ သငျ၏စီးပှားရေးတှငျ ဆရာမိဘမြား၏ အကူ အညီကွောငျ့ စီးပှားရေးကောငျးလာမညျ။ ဆကျသှယျရေးနှငျ့ အကြိုးဆောငျ၊ စာခြုပျ၊ စာတမျးမြား စသော အထှထှေလေုပျငနျးတို့ကွောငျ့ ဟိုနညျးနညျး ၊ ဒီနညျး နညျးဖွငျ့ ငှမြေား ပုံမှနျဝငျနမေညျ။ ဝငျငှကေောငျးနသေော အခြိနျကာလဖွဈသညျ။
အိမျထောငျရေးတှငျ နှဈကိုယျ့ တဈစိတျ ဆိုးတိုငျပငျ၊ ကောငျးတိုငျပငျဖွငျ့ အတှဲညီသော ဇနီးမောငျနှံဖွဈမညျ။ သားသမီးတို့အတှကျ နှဈယောကျ စလုံး စိတျပူပနျဖွဈမညျ။ ပညာရေးတှငျ ဟိုစပျစပျ၊ သညျ စပျစပျနှငျ့ ဘယျတော့မှ ဆုံးခနျးတိုငျအောငျ မရောကျပဲ ဖွဈ မညျ။ အခဈြရေးတှငျ အသကျကွီးသူ၏ ခဈြမွတျ နိုးမှု၊ စိုးမိုးလှမျးမိုးမှုကို ခံရမညျ။ အနီးအနားရှိ ငယျရှယျ သူမြားနှငျ့လညျး ကွိုးခငျြးထားပွီး ငွိတှယျသှားတတျ ကွသညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ ရခြေိုးမှားမညျ။ ညဘကျတှငျ ခေါငျးလြှျောတာမြိုးအထူးရှောငျစခေငျြပါတယျ။ မိနျးက လေး မြား ခြှေးငုတျ၊သှေးငုတျဖွဈတတျပါတယျ။
ယခုကာလအတှငျး ဤကာလအတှငျး မမြှျောလငျ့ဘဲ ငှအေစုအလိုကျအပုံလိုကျ ဝငျကိနျးရှိနပေါ၍ ထီကံ စမျးခွငျးမြား ပွုလုပျပေးသငျ့ ပါသညျ။ သငျ၏ကံဇာတာအထူးကောငျးနသေျောလညျး အရာရာကိုတော့ သတိပွုပါ။ သငျ၏ကုသိုလျကံတရားကွောငျ့ တှကွေုံ့ ရငျ ဆိုငျနရေသော အခကျအခဲမြားကို ကြျော လှား သှား နိုငျမညျ။ ဝနျထမျး ဖွဈပါက ဒီထကျတဆငျ့မွငျ့သောအလုပျ၊ဋ်ဌာနနှငျ့နရောထိုငျခငျးသဈမြား ပွောငျးလဲနေ ထိုငျရခွငျးမြား ရှိမညျ။ သငျ သညျ ခြေးငှားထားသော ငှကွေေးမြား ပွနျလညျမရရှိမှုမြားကွောငျ့ စိတျညဈရခွငျး ရှိ မညျ။ ထို့အပွငျ အလိမျခံရ တတျခွငျး၊ အမှုဖွဈတတျခွငျး၊ အမှုပတျတတျခွငျးတှကေိုလညျး သတိထားရနျ လိုမညျ။
မကွာခဏငှကွေေးအရှုပျ အရှငျးပွဿနာမြားပျေါပေါကျလာတတျသညျ။အိမျထောငျရှငျဖွဈပါကအိမျတှငျးရေး အဆငျ ပွမေညျ။ ငယျရှယျသူ မြား၏ အခဈြရေးမှာ ကွားစကားကွောငျ့ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ အထငျအမွငျ လှဲမှားခွငျးမြား ရှိနမေညျ။ ပညာရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကံကောငျးခွငျးမြား ရှိနမေညျ။ပညာအသဈမြားသငျယူခှငျ့ရရှိမညျ။ ကနျြးမာရေးမှာ မကွာခဏ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျး ရောကျရ တတျပါသညျ။ ညနဘေကျ နရေောငျ မရှိတော့သညျ့အခြိနျတှငျ ရခြေိုးခွငျးနှငျ့ အအေးခံခွငျးမြိုးကို လုံးဝရှောငျ ကွဉျသငျ့ပါသညျ။